जंगली च्याउ खादा बिरामी परेका अर्का एकको मृत्यु « epurwa
जंगली च्याउ खादा बिरामी परेका अर्का एकको मृत्यु
प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १३:२६
संखुवासभा । जिल्लाको सिलिचोङ गाउँपलिका वडा नं. ५ याफुका जंगली च्याउ खाँदा विरामी भएकामध्ये अर्का एक जनाको ज्यान गएको छ । लाईगार्ड अस्पताल विराटनगरमा उपचाररत २१ बर्षिया निर्जला राईको ज्यान गएको हो ।
सोमबारबाट आईसियु कक्षामा उपचाररत उनको मंगलबार विहान ज्यान गएको आफन्त डेविन मेवाहाङले जानकारी दिए । यो भन्दा अगाडी एकै पटक विरामी परेका आठ बर्षिया रोजिना राईको ज्यान गईसकेको छ । गत शुक्रबार राति च्याउ खाएर एकै घरका ९ जना विरामी परेका थिए ।
सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नं. ५ याफुका बुवा बुद्ध बहादुर राई र आमा बुद्धि माया राईसहित परिवारका नौ जना विरामी परेका छन् । बुवाको याफु आधारभूत स्वास्थ्य इकाईमा उपचार भईरहेको छ ।
जिल्ला अस्पतालमा उपचार नहुने भएपछि धरान विपी काईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रेषण गरिएको आठ विरामीमध्ये दुई जनाले ज्यान गुमाएको छ । मृतक निर्जला राई कान्छा छोरा सहदेवका श्रीमति हुन् । उनीहरुको ४ महिनाको बच्चा रहेको छ । बच्चा आफन्तको सहारामा गाउँमै राखिएको जनाईएको छ ।